Home Wararka Axmed Karaash oo lagu eedeeyay baxsashada maxbuuskii ku xirnaa xabsiga Qardho
Axmed Karaash oo lagu eedeeyay baxsashada maxbuuskii ku xirnaa xabsiga Qardho
Waxaa jira eedaymo loo jeediyay madaxweyne ku xigeenka Puntland, Axmad Karaash kaas oo lagu eedeeyay in uu lug ku lahaa baxshada Maxbuus ku xirnaa xabisaga Qadho. 30-kii bishii hore Juun waxaa xabsiga weyn ee magaalada Qardho laga saaray nin dil toogasho ku xukunaa oo lagu magacaabo Axmed Cabdi Jaamac. Xukumanaha oo markii hore nin ku dilay magaalada Laascaanood ayaa dowladda federaalku ku qabatay Muqdisho, waxayna ku soo warejiyay Puntland oo xukunka ku riday.
Dhanka kale, Odayaal iyo waxgarad dhibane u ah kiiskan oo warbaahinta la hadlay ayaa madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Karaash ku eedeeyay in uu lug leeyahay siidaynta gacan ku dhiiglaha. Odayaasha ayaa sheegay in ninkaas hadda lagu hayo deegaan ka tirsan gobolka Sool, waxayna madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ka codsadeen in uu wax ka qabto dhacdadan.
Afhayeenka Ciidanka Asluubta Puntland Cabdirisaaq ee Puntland, Maxmuud Xirsi ayaa sheegay in maxbuuska toogashada ku xukunaa xabsiga looga saaray arrimo caafimaad, hase ahaatee ay ciidamadii ilaalinayay ula galeen koox hubaysan. Afhayeenka Asluubta wuxuu intaas ku daray in kiiskan ay u xiran yihiin saraakiil ciidan oo ku lug leh, kuwaas oo sida uu sheegay sharciga la horkeeni doono.
Previous articleCiidanka Booliiska oo qof hubaysan ku toogtay Ex Control Balcad
Next articleXukun dil ah oo lagu riday xubno lagu sheegay Al-shabaab & cabasho ka dalatay
Xabsiga Godka Jilicoow oo dib loohowl galiyay & Jirdil ba’an oo...